Iindaba - Irali yelori yokutya yafika kwiZiko lokuthenga iChesterfield ngoNovemba kwaye yabhukisha ababoneleli abangama-36
Ilitye laseBritani.Louis-Kobu busika, eyona ndibano inkulu yehlabathi yelori yokutya iza kubamba indibano yelori yokutya eChesterfield.
Ngokwephepha lomnyhadala we-Facebook, i-Generation Entertainment yaseFlorida kunye neyona ndawo inkulu yelori yokutya kunye nezinye iinkampani ezintathu ziya kubamba umsitho welori yokutya kwi-Chesterfield Mall ukusuka nge-11 ukuya kwi-11 pm ngoMgqibelo we-13 kaNovemba.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukongeza kwiinkampani ezili-9, malunga ne-27 abathengisi bokutya kunye nesiselo babhukishwe.Kungenwa simahla.
NgoMatshi ka-2021, i-Generation Food Truck (USA) yaphumelela iRekhodi yeHlabathi ye-Guinness ngowona mngcelele mkhulu welori yokutya weenqwelo ezili-121 owawubanjelwe kwiZiko leMiboniso laseFlorida.
Ilitye laseBritani.Louis-Isikolo sobugqirha sibhengeze ngorhatya lwangoLwesihlanu ukuba iBelma E. Givens, inkosikazi yongasekhoyo uMongameli weYunivesithi yaseHarrisstow State uGqr Henry Givens, uswelekile.
Ilitye laseBritani.Louis County, Missouri-St.Umphathi wamaPolisa obambeleyo eLouis County uKenneth Gregory uswele amava.Kodwa la mava matsha kubunkokeli lelinye leminyaka ingama-69 elivumileyo ukuba usaqhelana nalo.
“Oku kunokukhula kum kuphela, kunokundigxotha.Andazi okwangoku.Ndiyakonwabela le nto ndiyenzayo ngoku.Ndiyazi ukuba eli sebe lingumceli mngeni kum, kwaye ndijonge phambili ekujonganeni nalo.Umngeni,” utshilo uGregory.